Ku soco iimaan run ah maanta
MAANTA dad badan baa sheegta inay iimaan leeyihiin. Laakiinse Ciise wuxuu bari jiray inay dad aad u fara yar iimaan run ah haystaan. Wuxuu yiri jidka ballaadhan waa “kan xagga baabbiʼidda u kaca, oo kuwa ka galaa waa badan yihiin. Waayo, iriddu waa cidhiidhsan tahay, jidkuna waa yar yahay kan xagga nolosha u kaca, kuwa helaana waa yar yihiin.”—Matayos 7:13, 14.
Sidee bay dadku maanta u muujiyaan inay iimaan run ah haystaan? “Midhahooda ayaad ku garan doontaan” buu Ciise yiri, waayo ‘geed kasta oo wanaagsan midho wanaagsan buu dhalaa, geedkii xumina midho xun buu dhalaa.’ (Matayos 7:16, 17) Sidaas darteed buu iimaanka runta ah “midho wanaagsan” u dhalaa. Wuxuuna dadka ku dhaqaajiyaa inay tayooyin uu Ilaahay ku farxo muujiyaan. Sidee bay tayooyinkaas u tusaan?
Si qumman u isticmaal quwadda
Dadka iimaan run ah haysta awooddooda si habboon bay u isticmaalaan si ay Ilaah u xushmeeyaan oo dadka kale wax ugu faaʼiidayaan. Ciise wuxuu ina baray inaan dadka ka hooseynno wuxuuna yiri: “Laakiin ku alla kii doonaya inuu dhexdiinna u weynaado, midiidinkiinna waa inuu ahaado.” (Markos 10:43) Sidaas si la mid ah bay nimanka iimaanka runta ah haysta ayna gumeysi ahayn, guriga dhexdiisa ama dadweynaha dhexdooda. Xaaskoodna way xannaaneeyaan wayna xushmeeyaan oo si dareen jacayl leh bay baahidooda ugu fuliyaan. Qoraalku wuxuu yiri: “Nimankow, idinkuna afooyinkiinna jeclaada” oo si kulul ha ugu cadhoonina. (Kolosay 3:19) “Nimankow, idinkuna sidaas oo kale afooyinkiinna aqoon kula dhaqma sidii iyagoo ah weel tabardaran, oo iyaga maamuusa sida kuwa idinla dhaxla nimcada nolosha, si aan baryadiinna loo hor joogsan.”—1 Butros 3:7.
Sidaas oo kalena xaas iimaanka runta ah haysata waa inay aad “ninkeeda . . . maamuusto.” (Efesos 5:33) Xaasasku waa “inay jeclaadaan nimankooda iyo carruurtooda.” (Tiitos 2:4) Aabbayaasha iyo hooyooyinka oo iimaanka runta ah haysta carruurtooda bay waqti la qaataan oo Ilaahay sharcigiisa iyo qaynuunnadiisa bay baraan. Guriga, shaqada iyo meel kaleba si xushmad iyo maamuus leh bay dadka ula dhaqmaan. Oo waxay raacaan waanada Qoraalka oo ah: “Midkiinba midka kale ha hor derejeeyo” markay ixtiraam muujinayaan.—Rooma 12:10.
Addoommada Ilaahay waxay ku socdaan amarka Qoraalka oo leh: “Waa inaadan laaluush qaadan innaba.” (Baxniintii 23:8) Weligoodna darajadooda si damaaci ah u ma isticmaalaan. Laakiinse waxay raadiyaan fursad ay dadka kale u caawiyaan weliba si gaar ah kuwa baahi qaba. Waxayna ka fiirsadaan taladan: “Inaad wax wanaagsan fashaan oo wax wada wadaagtaan ha illoobina; waayo, allabaryada caynkaas ah Ilaah aad buu ugu farxaa.” (Cibraaniyada 13:16) Sidaa awgeed bay runtii erayadan Ciise u dareemeen: “In wax la helo, waxaa ka barako badan in wax la bixiyo.”—Falimaha Rasuullada 20:35.
Raac caddaaladda Ilaahay
Dadka iimaanka qaba sharciyada Ilaahay si raalli ah bay u addeecaan oo iyaga ‘qaynuunnadiisuna lama cusla.’ (1 Yooxanaa 5:3) Waxayna og yihiin inuu sharciga Yehowah kaamil yahay oo inay qaynuunnada Yehowah hagaagsan yihiin, oo ay qalbiga ka farxiyaan, oona inuu amarka Yehowah daahir yahay oo indhaha nuuriyo.—Sabuurradii 19:7, 8.
Iimaanka runta ahna dadka wuxuu ku dhaqaajiyaa inay iska diidaan nooc kasta oo ku saabsan kala eexasho oon sal lahayn. Dadkaas ma laha u kala sarraysiin ku saabsan jinsi, waddan ama kalasarraynta bulshada, laakiinse Ilaah bay ku daydaan. “Ilaah inuusan dadka u kala eexan: laakiin kii kastoo Ilaah ka cabsada, xaqnimadana sameeya, quruun kastaba ha ku jiree, Ilaah waa aqbalaa.”—Falimaha Rasuullada 10:34, 35.
Iimaanka runta ah dadka wuxuu ku dhaqaajiyaa inay si daacad ah wax kasta u sameeyaan. (Cibraaniyada 13:18) Qof iimaan run ah haysta wuxuu ka fogaadaa inuu la wareego war iyo xamasho xun. Siduu nebi Daaʼuud qoray waa inuu qofku Ilaahay oggol yahay ahaado mid “aan carrabkiisa wax ku xaman, ama aan saaxiibkiis xumaan ku samayn.”—Sabuurradii 15:3.
Noloshaada ka muuji xigmadda Ilaahay
Kuwa iimaanka runta ah haysta rumaysadkoodu wuxuu ku saldhigan yahay Qoraalka Quduuska ah oo keliya. Waxayna aamminsan yihiin inuu “Qorniin kastaa . . . ku ahaaday Ruuxa Ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda, iyo canaanashada, iyo hagaajinta, iyo edbinta xagga xaqnimada.” (2 Timoteyos 3:16) Xiriirka ay dadka la leeyihiin waxaa ka muuqda “xigmaddii kor ka timaadaa” oo horta ah “daahir, dabadeedna waa nabad iyo qabow iyo mid si dhib yar loola heshiiyo, oo waxaa ka buuxa naxariis iyo midho wanaagsan.” (Yacquub 3:17) Wayna ka fogaadaan caado aan cibaado lahayn iyo sixirnimo iyo sanamyada.—1 Yooxanaa 5:21.
Tus jacayl daacad ah
Nebi Muuse wuxuu yiri: “Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo xooggaaga oo dhan.” (Sharciga Kunoqoshadiisa 6:5) Dadka iimaanka runta ah haysta waxay tusaan jacaylkaas oo kale inay Ilaah u qabaan. Waxayna maamuusaan magaca Ilaahay Yehowah. Waxay yeelaan siduu Kitaabku sheegay markuu yiri: “Rabbiga ku mahadnaqa, oo magiciisa ku barya” si iimaan leh. (Sabuurradii 105:1) Addoommada Ilaahay waxay maqlaan amarkiisa: “Waa inaad deriskaaga u jeclaataa sidaad naftaada u jeceshahay oo kale.” (Laawiyiintii 19:18) Cidna wax ma yeelaan oo waxayna doonaan inay ‘nabad kula joogaan dadka oo dhan.’ (Rooma 12:18) Waxay la mid tahay iyagoo ‘seefahooda ka tuman doono marashiyo, warmahoodana manjooyin.’ (Ishacyaah 2:4) Sidaas awgeed bay jacayl isku qabaan oo ku mustareexaan walaaltinnimo caalami ah. (Yooxanaa 13:35) Maanta miyaad garan kartaa dadkaasi kuway yihiin?
Sidee baa lagu gartaa dadka iimaanka runta ah leh?
Sidee bay dadka iimaanka leh noloshooda uga muujiyaan tayooyinka Ilaahay oo ku saabsan xoog? xigmad? caddaalad? jacayl?
Wadaag Wadaag Ku Soco Iimaan Run ah Maanta